म्हेन्दोमायाका अभियन्ता सागर एस. वाइबा सांगीतिक क्षेत्रमा शिखर चुम्दै
प्रकाशित मिति: 2018/10/14
काठमाडौं । न त मलाई कसैले तिम्रो स्वर राम्रो छ तिमी गीत गाऊ भनेर भन्यो, न त तिम्रो जिउडाल ठिक छ तिमी हिरो बन्न जाऊ भन्यो, त्यसकारण मेरो मोटिभेटर कोही छैन भन्न रुचाउने व्यक्ति आज तामाङ समुदायमा एकदमै लोकप्रिय गायक बनेका छन् । उनी हुन्, नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकाका सागर एस. वाइबा ।
नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकामा २०३९ सालमा जन्मेका वाइबालाई सबैले म्हेन्दोमायाका किङ (राजा) भनेर चिन्छन् । साधारण परिवारमा हुर्केका वाइबाले आफ्नो बाल्यकाल नुवाकोटमै बिताए । गाउँकै ज्ञानज्योति माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको अध्ययन गरे । प्रथम श्रेणीमा एस.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण गरेका वाइबालाई सर्वप्रथम त डाक्टर तथा इन्जिनियर बन्ने नै रुचि थियो । त्यही कारण उनी आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि ०५७ सालमा काठमाडौं पसे । त्यति व्यवस्थित बसाइ थिएन, त्यसबेला । मैले सबै कुराहरु आफैले हेनु पथ्र्यो ।
काठमाडौं प्रवेशपछि विभिन्न कलेजहरु उनले धाएँ । तर अन्तिममा उनी ललितकला क्याम्पसमा भर्ना हुन पुगे । कारण थियो त केवल आर्थिक कमजोरी । मेरो परिवारको संख्या अरुको भन्दा अलि धेरै थियो । हामी ५ भाइ र २ दिदीबहिनी गरी ७ जना सन्तान थियौ । सबैलाई हुकाउन पढाउन गाह्रो थियो । त्यसैले म मेरै कमाईले पढ्छु भनी काठमाडौं प्रवेश गरेको थिए ।
अन्ततः ललितकला क्याम्पसमा मैले गायन विषय रोजे । अरु विषयभन्दा कम शुल्क लाग्ने विषय, आइ.ए. सम्म पढे । त्यसपछि गीतहरु गाउन र रेर्कड गर्न थाले । सुरुमा नेपाली तथा लोकदोहोरीहरु गीत गाउन थाले । उनी त्यसबेलाको अवस्था सम्झदैं भन्छन्, मैले गीत रेर्कड गराउने समयमा जातित्वको कुराहरु चलिरहेको थियो । सबै जना आ–आफ्नो भाषालाई बचाउनमा लागि परेका थिए । मैले पनि मौकाको फाइदा लिए, वाइबा हाँस्दै सुनाउँछन् । तामाङ समुदायमा म्हेन्दोमायाका भाकाहरु लोप भइरहेको अवस्था थियो । त्यही भाकाका गीतहरु कोर्न थाले । गुनगुनाउन थाले र साथीभाइहरुले पनि सहयोग गरे । सबैले मन पराइदिएँ । त्यसपछि मलाई सबैले तिमीले तामाङ भाषालाई बचाउन यस्तै गीतहरु गाउन सूझाव दिन थाले ।
म्हेन्दोकोे शाब्दिक अर्थ भन्नाले पूmल हो र माया भन्नाले प्रेम, स्नेह हो । यो विभिन्न प्रकारको हन्छ । कुनै सुखमा त कुनै दुःखमा गाइन्छ ।
त्यसो त यी गीतहरु फरक फरक किसिमको हन्छ । तर यो भने परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको हो । देउडा, सेलोजस्तै एकदमै लोकप्रिय तर बजारमा आउन नसकेको, मैले भने यसलाई उत्थान गरेको हुँ, वाइबा गौरवका साथ भन्छन् । परापूर्वकालमा गाउँदा यो बिना सुर र ताल, लयमा गाइन्थ्यो न कुनै बाजागाजाको आवश्यकता ठान्थ्यो । मैले यसमा रङ थपेको छु ।
जति जति गीतहरु गाउन थाले, त्यति नै बढी साथ र सहयोग मिल्दै गयो । ०६० सालमा गीत रेर्कड गराएँ । बजारमा आएँ । त्यसपछि ०६२ मा म्हेन्दोमायाको एल्बम नै निकाल्न सफल भए । यो मेरो पहिलो सफलता हो, वाइबा भन्छन् । विस्तारै भिडियोहरु पनि बनाएँ ।
भिडियोमा पनि वाइबा आफैंले हिरोेको रोल गरेका छन् । उनी भन्छन्, मैले यो पैसा जोगाएको होइन । मलाई लाग्छ, आफूले सक्ने काम आफैं गर्नुपर्छ ।
हालसम्म उनको १५० को हाराहारीमा गीतहरु बजारमा आइसकेका छन् । यी सबै तामाङ गीतहरु नै हुन् । त्यसैले उनी भन्छन्, यो धेरै बिक्री नभएको हुन सक्छन्, अरु नेपाली तथा पप गीतहरु जस्तो । तर तामाङ समुदायमा हेर्ने हो भने सबैको भन्दा बढी भियोर्सहरु मेरै भिडियोको छ ।
सांगीतिक क्षेत्रकै क्रममा वाइबाले थुप्रै देशहरु घुमिसकेका छन् । कुबेत, बेल्जियम, फ्रान्स, कोरिया, र्पोचुगल, होल्यान्ड, कतार, मलेसिया, अमेरिकामा आफ्नो दमदार प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यी देशहरुमा जाँदा कतै कम त कतै बढी दर्शकहरु थिए, उनी सुनाउँछन् जहाँ मान्छेहरु सजिलै जान सक्छन् त्यहाँ बढी दर्शक थिए भने जहाँ कम नेपालीहरु थिए त्यहाँ कम दर्शकहरु थिए । तर एकदमै कम सहभागी भने बेल्जियममा प्रस्तुत गर्दा लागेको थियो । त्यहाँ जम्मा ३०० दर्शकहरु थिए ।
यस्तै वाइबाले आफ्नै अध्यक्षतामा २०७२ सालमा म्हेन्दो माया कलाकार संघ पनि दर्ता गरिसकेको उनी सुनाउँछन् । म्हेन्दोमायालाई अझ प्रगाढ गर्न म हरदम लागि पर्नेछु । साथै यसमा मलाई मेरो परिवारको पनि एकदमै सहयोग रहेको छ, उनी बताउँछन् । छोराछोरी पनि गीत सिकेर मेरो सट्टामा कहिलेकाहीं गाउन जाने गर्दछन् । अहिले मेरो छोराछोरी कक्षा ११ मा युनिग्लोब विद्यालयमा पढ्दै छन् । मेरो कमाइ भनेको यिनै हो, उनी हाँस्दै सुनाउँछन् । न कुनै घर बनाए, न त कुनै जग्गा नै, केबल छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाउन सके । यत्तिमै खुसी छु । हाल वाइबा परिवार बालाजुमा बस्दै आइरहेका छन् ।